के तपाईंको हृदय उर्वरा माटो जस्तो छ? – Shalom Nepal
के तपाईंको हृदय उर्वरा माटो जस्तो छ?
Posted on August 6, 2020 August 6, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
शालोम नेपाल – येशूले हाम्रो हृदयलाई उर्वरा माटोसित तुलना गर्नुभयो। माटोको उखान भनेको विश्वासीहरूको लागि एउटा स्मरण हो कि फल फलाउनको लागि उनीहरूको हृदयहरू ठीक ठाउँमा हुनु आवश्यक छ। यदि इसाईको हृदयहरू परमेश्वरको वचनमा कठोर छ भने, तब त्यहाँ कुनै फल फलेर वृद्धि हुनेछैन। इसाईको हृदय ढुङ्ग्गा र सामाले भरिएको छ भने, आफैले केही वृद्धि देख्न सक्नुहुन्छ, तर यो पर्याप्त हुनेछैन। फलवन्त र उर्वरा हृदय हुनको लागि हामीले यस संसारको ख्यालहरू हटाउनु पर्छ। त्यसैले तपाइँको हृदय सहि ठाउँमा राख्नुहोस्।
उर्वरा हृदयहरू पवित्र आत्माको निरन्तर कामको परिणाम हो। पापहरूको लागि पश्चात्तापको कार्य छ जस्ले कडा क्षेत्रहरू तोड्दछ, र त्यहाँ विश्वासको काम पनि छ जुन हामीलाई राम्रो देखिने माटोमा सतर्क गराउँछ, तर तल ढुङ्ग्गा छ जसले जरालाई भित्र जान अनुमति दिँदैन। र अन्तमा, आफूलाई इन्कार गर्ने काम हुन्छ। यदि यो अवस्थामा तपाईंले आत्मालाई यो कामको लागि दिनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो हृदयमा उर्वर माटो देख्नुहुनेछ।
त्यसैले के तपाईंको हृदय उर्वरा माटो जस्तो छ? धेरै इसाईहरू आफ्नो जीवनको सय गुणा फलमा फोकस गर्छन् साथै कडा परिश्रम पनि । आज आफ्नो हृदयलाई आत्माको काममा पेश गर्नुहोस् र उहाँलाई सफा गरि उर्वरा माटो उत्पादन गर्न दिनुहोस्। तब तपाईको जीवनले धेरै फल फलाउनेछ।
तर असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्‍यो हो, जसले वचन सुन्‍छ, र बुझ्‍दछ, र साँच्‍चै फल फलाउँछ। त्‍यसले छरेको बीउबाट सय गुणा, साठी गुणा र तीस गुणा फसल फलाउँछ। मात्ति १३:२३
मानिसप्रति परमेश्वोरको दृष्टि
Posted on June 8, 2020 June 8, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – यदि हामि परमेश्वोरको दृष्टि वा हेराई हामि माथि भएको चाहान्छौ भने, सबै भन्दा पहिले नम्र र आज्ञाकारी हुन सिक्नुपर्दछ। किनकि परमेश्वोरले नम्रहरुलाई अनुग्रह प्रदान गर्नुहुन्छ। के तपाइँ हृदयमा विचलित हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने जसले हृदय बनाउनुभयो उहाले त्यो हृदयलाई पूर्ण तवरमा बनाई स्वच्छ अनि सफा गर्न सदैव तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वोरले […]
असल जीवनको महत्व
Posted on June 1, 2020 June 1, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – आत्माले भरिएको जस्तो असल जीवन अरू जीवन हुदैन । किनकि आत्माले भरिएको जीवनमा परमेश्वोरको पूर्णता हुदछ । जसले मानवको सोचाईभन्दा बढि इश्वरीय सोचाईमा आफ्नो ध्यान लगाउदछ । जसको परमेश्वोरलाई नै खुशी पार्नु पहिलो प्राथमिकता हुन्छ।तर आज हामि मानव पूर्ण अटेरी भै आफ्नै संसारमा रमाई रहेका छौ । परमेश्वोरलाई खोजेको जस्तो त हामि […]
माथिको कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् ।
परमेश्वोरले तपाईंलाई चुन्‍नुभयो।